လေထထဲမှ ဂေါက်သီးအား ကားဖြင့်မောင်းပြီး လိုက်ဖမ်း၍ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Home » News » လေထထဲမှ ဂေါက်သီးအား ကားဖြင့်မောင်းပြီး လိုက်ဖမ်း၍ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်
admin | News | June 4, 2012
မာစီးဒီးကားကုမ္ဗဏီမှ Viral Film အဖြစ်ရိုက်ကူးသောအစီအစဉ်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂေါက်သီးရိုက်သမားဖြစ်သော Jake Shepherd နှင့် ဖော်မြူလာဝမ်း ကားမောင်းသမားဟောင်း David Coulthard တို့အား ခေါ်ယူရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။ David သည် 571hp ရှိသော Mercedes-Benz SLS AMG Roadster ကားအား တစ်နာရီမိုင် ၁၂၀ နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်ပြီး Jake ရိုက်လိုက်သော ဂေါက်သီးအား လည်းကောင်း အမိုးပွင့်ကားပေါ်မှ ဖမ်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ်ရိုက်ကူးမှုမှာ မအောင်မြင်သော်လည်း ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည် ရိုက်ကူးရာတွင် ထိုသို့ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဂင်းနစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သည်ဟု မာစီးဒီးမှ ထုတ်ပြန်သော သတင်းအရ သိရသည်။
အဆိုပါမှတ်တမ်း ဗီဒီယိုအား ဂျူလိုင်လဆန်းပိုင်းတွင် မာစီးဒီး၏ SLS AMG Roadster ကားအားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ David Coulthard က “အခုလို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုဟာ ကျွန်တော့်ကို ကားနဲ့တစ်ခုခုလုပ်ပြခိုင်းတဲ့ တကယ့်အထူးဆန်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ Jake hepherd နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ အင်မတန် performance ကောင်းတဲ့ SLS AMG Roadster ကားကိုမောင်းပြီး လေထဲက ဂေါက်သီးကို ဖမ်းဖို့ကြိုးပမ်းရတာ အင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်း ကောင်းပါတယ်။” ဟုပြောကြားသွားပါသည်။
1,727 total views, 1 today Print
8 Responses to “လေထထဲမှ ဂေါက်သီးအား ကားဖြင့်မောင်းပြီး လိုက်ဖမ်း၍ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်”
Samuel Mâu Meow Faith on June 5, 2012 @ 2:11 pm I think my question is how he's catching the golf ball, not how he's catching up with it. I hope he has fast hands too =)).
Reply Wai Yan Lin on June 7, 2012 @ 9:45 am we will see how he did that when the video is released Reply Maung Maung Aye on June 5, 2012 @ 7:14 pm Amazing.
Reply Kyaw Min Yu Minyu on June 10, 2012 @ 11:21 am အ၇မ်းကောင်း
Reply Win Ko Ko on June 12, 2012 @ 6:32 am movies ဆို ပိုကြည့်ကောင်းမှာပဲ.
Reply Herryjame San on June 22, 2012 @ 2:36 pm if you want to buy the car should be know this know this.thanks for share knowdge…
Reply Tun Than Win on June 28, 2012 @ 8:43 am အပြင်မှာတကယ်ကြည့်ရရင်ကောင်းမယ်။
Reply Aung Lay on December 6, 2012 @ 5:37 am http://www.youtube.com/watch?v=VgKMGwfo5sg မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်
Toyota Hilux Surf	Light truck (1 ton) toyota, nissan ၀ယ်လိုသည်	Good Morning Everyone	1300 cc car Tyres	Facts to be careful before purchasingacar	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများHONDA CR-V 99 (41 views)Hillux SURF (21 views)2011 Belta X-L Pakage(like New) (16 views)Nissan AD Van (16 views)caldina 2002 zt (14 views)BELTA (13 views)swift 2011 (10 views)2002 Mark II Regalia (10 views)MARK2(9 views)Prado3door (9 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.